War Murtiyeedka laga soo saaray shirka Amniga Qaranka. – Hornafrik Media Network
War Murtiyeedka laga soo saaray shirka Amniga Qaranka.
Hornafrik-Golaha Amniga Qaranka ayaa kulankoodii joogtada ahaa ku yeeshay magaalada Baydhabo, 3-5 Juun 2018. Shirkaas oo ka dhacay Xarunta Madaxtooyada, Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxaa looga hadlay arrimaha Amniga Qaranka, waxaana shir-guddoomiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shirka amniga Qaranka oo la isku mar la’yahay.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Kenya oo qarax ku dhintay.